China Shuttle Mover orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1 Pallet fampitana Ny fahaiza-mitondra pallet mahaleo tena, ny shuttle mover ary ny radio shuttle dia miasa amin'ny asa haingana.
2 Famandrihana an-tserasera Fanaraha-maso ny tokonam-baravarana herinaratra marobe, mitsara tena ary mi-charge amin'ny tsipika.
3 Fanaraha-maso lavitra Faneriterena iray hamadika ny asa an-tserasera sy amin'ny tanana amin'ny fomba fanaraha-maso lavitra (tsy voatery)
4 Fanaraha-maso ny rafitra Fanaraha-maso ny angona rafitra amin'ny fotoana tena izy ary fanairana amin'ny feo sy hazavana amin'ny toe-javatra tsy ara-dalàna
5 Fihetseham-po Mifandraisa amin'ny fampiantranoana rafitra fanaraha-maso ny solosaina amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny fitepon'ny fo, ny fanaraha-maso ny sata an-tserasera.
7 Fijanonana vonjy maika Tsindrio ny bokotra fiatoana vonjy maika na avoaka ny famantarana fiatoana vonjy maika amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso.Manaiky toromarika fiatoana vonjy maika, mijanona avy hatrany ny fiara fitaterana mandra-pialana vonjy maika.
Mahay miantoka ny fijanonan'ny fitaovana na ny entana amin'ny fihemorana faran'izay haingana rehefa manatanteraka ity torolàlana ity.
②Karazana entana inona no mety amin'ny Rafitra fitahirizana Shuttle Mover?
Karazana fonosana entana: Pallet
Ny haben'ny entana (mm): W1200xD1000mm;W1200xD1200mm;W1400xD1200mm;W1000xD1100mm;W1200xD1200mm.
lanja entana: <=1500kg
Famantarana ny tranokalan'ny barcode, toerana marina ary asa azo antoka.
Afaka miditra amin'ny radio shuttle sy mampita pallet.
Miasa mandeha ho azy tanteraka ao anatin'ny 24 ora.
Afaka manefa radio shuttle an-tserasera miasa.
Na ny FIFO sy ny FILO dia mety ho tratra.
④ Karazana asa
Sub-lane ho toy ny singa fitahirizana sy ny lalana lehibe ho toy ny lalana fampitana, dia mitahiry sy maka entana avy hatrany ary mety ho hafa toy ny fandaharana amin'ny lafiny roa sy ny fandaharana eo afovoany.
◆Amboary ny fiarandalamby sy ny lalamby eo amin'ny lafiny roa amin'ny fijanonan'ny fiara
· Fomba fiasan'ny radio shuttle: FIFO
· Fomba fidirana / fivoahana: miditra amin'ny ilany iray ary mivoaka amin'ny ilany iray
◆Amboary ny zotram-piaramanidina sy ny lalamby eo afovoan'ny fijanonan'ny fiara
· Fomba fiasan'ny radio shuttle: FILO
· In/Out mode: miditra sy mivoaka amin'ny lafiny iray
fiara fitaterana an-dalamby sy lalamby amin'ny lafiny roa amin'ny racking shuttle
mpitaingina fiara sy lalamby eo afovoan'ny racking shuttle
⑤Design, Test & Warranty
Halavan'ny pallet____mm ​​x sakany____mm ​​x Haavo___mm ​​x lanja_____kg.
Fahombiazana miditra sy mivoaka: Ny habetsahan'ny paleta isan'ora_____
Hosedraina alohan'ny fanaterana ny fiara fitaterana.Ny injeniera dia hitsapa ny rafitra manontolo amin'ny tranokala na amin'ny Internet.
teo aloha: Radio Shuttle
Manaraka: Rafitra fandefasana radio amin'ny lalana efatra
Carton Live, Shuttle amin'ny lalana efatra, Asrs Storage, Drive amin'ny Racking, Conveyor, Baby Shuttle,